के लापरवाह कार्यहरू गलत छ
सबै हामी कहिल्यै लापरवाह कार्यहरू। के दाना कार्यहरू सिर्जना र के उनलाई लागि panacea हुन सक्छ - पत्ता अधिक।
एक दाना अभिव्यक्ति के हो
मूर्ख कार्य, हतार चरण, एक धैर्य गरे निर्णय - यो सबै लापरवाह सकिन्छ।
तपाईं नतालिया Nikolaevna परिचित छैनन् भने, म यो indiscretion सुधारने सकेसम्म तपाईंलाई सल्लाह।
आफ्नो न्याय हतार र बिल्कुल लापरवाह थियो।
यसलाई लापरवाह र दाना कार्य थियो।
शब्द को पर्यायवाची "दाना" एक "गल्ती, गलत improvident, लापरवाह, मूर्ख, अविबेकी, मूर्ख, लापरवाह, मूर्ख, लापरवाह, frivolous।" भन्न सकिन्छ
छलफल र दाना कार्य छैन
Recklessness - एक प्रतिबद्धता, अनियमित मा कार्य गर्न पनि धैर्य र विचारै। को गुण को प्रभाव मानिसहरूले निर्णय गर्नु अघि "फाइदा" र "बुरा" वजन गर्न सक्षम छन्।
यस पौराणिक शब्दकोश नोएल मा, शब्द "recklessness" जो एक पुतली मा हेर्दै र उसलाई अघि पातालमा देखेर छैन जमीनमा treads एक जवान ज्योति शर्ट मा, केटी को छवि संग दृष्टान्त छ।
त्यो तपाईंले एक व्यक्ति केहि, आफ्नो गतिविधिलाई ध्यान, गर्छ भने कामनाहरु, र पूर्ण सम्पूर्ण अवस्था देखेर छैन शब्द व्याख्या गर्न सक्छन्, छ।
त्यहाँ केही गोप्य मित्र recklessness छन्। तिनीहरूले व्यक्तिमा थाहा महत्त्वपूर्ण छन्। लापरवाह कार्य केही तिनीहरूलाई, निम्न कारक संग जोडीएको भने:
यो छ। कामवासना को प्रभाव अन्तर्गत केही प्राप्त गर्न इच्छा अक्सर लापरवाह प्रेरित गर्न एक व्यक्ति धक्का। तपाईं impulsively एक जोडीलाई सबै गुणहरू थाह बिना विवाह गर्न अपरिचित वा प्रेमिका विवाह गर्न सक्नुहुन्छ। अनियमित मा, तपाईं दिवालिया कम्पनी को सबै साझा, बिक्री आधा मा सामान खरिद गर्न, किन्न काममा राजीनामा पत्र लेख्न सक्नुहुन्छ, र बिहान उठ्नु र यो किन बुझ्दैनन् ...
rashness रूपमा यस्तो गुणस्तर व्यक्ति एक्लै कार्य गर्दैन। एउटै एक्लै हिंड्न सक्ने समस्या बारे भन्दै यस चिरपरिचित मा सुने गर्न सकिन्छ।
मूर्खता संग सम्बन्ध मा दाना बारेमा कार्यहरू उदाहरणहरूले एम्बुलेन्स कर्मचारी बताउन सक्छ। तपाईंले ती तपाईं उनको मुखमा एक चिम छडी वा उनको टाउको मा राख्नु एक पट गर्न सक्नुहुन्छ भने हरेक दिन जाँच गर्न चाहने कति थाहा? यी उत्सुक मान्छे सधैं सफलतापूर्वक फिर्ता घरेलू वस्तुहरू लिन गर्छन् बाहिर छैन र त्यसैले रोगी एम्बुलेन्स छन्।
कहिलेकाहीं आँखा overshadow गर्न सक्षम केहि लिन इच्छा। मानिस, तिर्सना आफ्नो सपना को वस्तु प्राप्त गर्न, लापरवाह प्रेरित commits।
Fraudsters लामो व्यक्ति लोभ उत्प्रेरित छ जब, यो "पतला" गर्न धेरै सजिलो छ कि ज्ञात छ। यो केवल हतारमा कार्य यस जडान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। र भोइला Query - प्रतिबद्ध भएको धोका ग्राहक swindler को भाग मा indiscretion।
एउटा उदाहरण, तपाईँ विकल्प विचार गर्न सक्नुहुन्छ मानिन्छ सुन उत्पादनहरु को केही गर्न अर्को लागि तातो खरीद भेटी, सडक मा रोकियो गर्दा। यस मामला मा चाल fraudster यहाँ र अब निर्णय लिन हतारमा छ। किनभने लोभ तिमी माथि माथिल्लो हात प्राप्त को हास्यास्पद मूल्य लागि महंगा धातु प्राप्त तपाईं एक jewel किन्न। तर, हामी बाल्यकाल देखि सम्झना रूपमा, मुक्त पनीर मात्र एक चूहादान छ।
राम्रो एक्लै गरौं
Ironically, hastiness एक मित्र, व्यक्ति को मात्र नकारात्मक गुणहरू, तर पनि सद्गुण बन्न सक्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईं अनाथालय पैसा दान गर्न चाहन्छु, तर यसको सट्टा एक स्वयंसेवक रूपमा आफूलाई प्रतिनिधित्व, बैंक खाता swindler हस्तान्तरण। यस्तो अवस्थामा, rashly कार्य छैन। र यो तपाईं बिचौलियों विश्वास थियो होइन र व्यक्तिगत यदि यो निमित्त कसलाई ती मानिसहरूलाई वित्तीय सहायता हुनेछ राम्रो हुनेछ।
अर्को व्यक्ति को समस्या समाधान गर्न मद्दत गर्ने प्रयास गरिएको छ व्यक्तिले भवदीय आफ्नो राम्रो काम मा विश्वास गर्दछन्। तर यो हुन सक्छ र भनेर लागि प्राप्त सहयोग र समर्थन विशेष आवश्यक छैन, र तपाईं बस केही आत्म-सेवा उद्देश्यका लागि प्रयोग।
दया - यो, को पाठ्यक्रम, धेरै राम्रो मूल्य र गुणस्तर, तर पनि हामी एक clanger ड्रप गर्न सक्दैन। अनुभवहीन छ - सबै कम से कम, जाँच बिना विश्वास गर्छु। पनि चर्च को लेखोटहरूमा मद्दत गर्ने भन्न नियमहरु, र राम्रो गर्ने राउन्ड प्राप्त गर्न छन्।
लापरवाह व्यवहार लागि उपचार
मुख्य उपकरण धोका छैन गर्न सकिन्छ र धेरै भरोसा विस्तार गर्न ध्यान छ। तपाईं कहिल्यै "एक स्वभाव मा।" निर्णय गर्न सक्छन् सबै तपाईं केहि बारेमा विशेष गरी शङ्का मा भने ध्यान दिएर सोच्न आवश्यक छ। र त्यसपछि आफ्नो समाधान लापरवाह हुन पक्कै छैन।
को अर्थ "जसलाई लागि वा के पछि देख्यो": केटी, फूल, परिवार, एक
जो डीजे छ: अर्थ
शब्द "nishtyak" सबै भन्दा साधारण छ को अर्थ के हो?
शब्दांशहरू र शब्द र्याप मा विभाजन को नियम
डेटिङ साइटहरूको बारेमा महत्त्वपूर्ण र उपयोगी जानकारी। रिश्तेदारहरु लाई सोच्न शुरु गर्नुहोस्
गल्फ होटल "Sorochany": फोटो र समीक्षा
भ्लाडिभास्तोक - खबरोभ्स्क: प्राप्त गर्न कसरी
"अल्फा-रोमियो": 2016-2017 वर्षको एक मोडेल संख्या।
Mascarpone कदम संग सरल व्यञ्जनहरु
हलोवीनमा मूल नाश्ता
पैन सामाग्री - यो के हो? यो संरचना र गुण
सुविधाजनक र व्यावहारिक: बालकनी लागि ड्रायर छत
"VKontakte" प्रकार्य। कसरी रेकर्ड "VKontakte" समाधान गर्न र यो छ